अनौठो व्यपार : कोरोनाको लक्षण लिएर पुग्ने जोकोहीलाई भोलि क्यान्सर निम्त्याउने सीटी स्क्यान
काठमाडौं । भारतमा बढ्दै गइरहेको कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर ठूलो संख्यामा सीटी स्क्यान भइरहेको छ । धेरै व्यक्तिहरुलाई कोरोना लक्षण भए पनि रिर्पोट नकारात्मक हुन्छ ।
त्यसपछि डाक्टरहरूले उनीहरूलाई सीटी स्क्यान लिन सल्लाह दिन्छन् । तर एम्स अस्पतालका निर्देशक डा. रणदीप गुलेरियाले यसलाई डरलाग्दो कार्य भनेका छन् । उहाँका अनुसार कोरोनाका हल्का लक्षण भएमा कुनै सीटी स्क्यान गर्नु आवश्यक छैन ।
डा. गुलेरिया भन्छन्, ‘सीटी स्क्यान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन सक्छ । यसबाट क्यान्सरको सम्भावना बढ्छ ।’ डा. गुलेरियाले थप्दै भने, ‘सीटी स्क्यान र बायोमार्करको दुरुपयोग भइरहेको छ । यदि हल्का लक्षणहरू छन् भने सीटी स्क्यानको कुनै फाइदा छैन ।
एउटा सीटी स्क्यान ३०० छाती एक्स रे बराबर हुन्छ । यो धेरै हानिकारक छ ।’ एम्सका निर्देशकले भने, ‘आजकल धेरै मानिसहरू सीटी स्क्यानमा छन् । जब सीटी स्क्यान आवश्यक पर्दैन, त्यसो गरेर, तपाई आफैंलाई धेरै हानी गर्दै हुनुहुन्छ किनकि तपाई विकिरणको सम्पर्कमा आफैंलाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ।
यसले पछि क्यान्सर हुने सम्भावना बढाउन सक्छ ।’ यसका साथै डा. गुलेरियाले घरमा अलग्गै बस्ने मानिसहरूलाई उनीहरूको डाक्टरसँग सम्पर्क राख्न सल्लाह दिएका छन् ।
उनले भने, ‘संतृप्ति (अक्सिजन प्रतिशत) ९३ वा त्यो भन्दा कम हुँदा बेहोश हुनेजस्ता परिस्थितिहरू छन्, यदि तपाईंको छाती दुखिरहेको छ भने, तुरुन्त चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।’